News - Raridda Weelasha loogu talagalay Mashruuca Bangladesh PCR
Xirxirida iyo raridda weelka sifiican ayaa fure u ah helitaanka rarka qaab wanaagsan marka macaamilkeenu qaata dhinaca kale. Mashruucyadan nadaafadda ee Bangladesh, maareeyahayaga mashruuca Jonny Shi wuxuu ku sugnaa goobta si uu kormeero una caawiyo dhammaan howlaha rarka. Wuxuu hubiyey in badeecada si fiican loo buuxiyey si looga fogaado waxyeellada inta lagu jiro gaadiidka.
Musqusha waa 2100 fuudh oo laba jibbaaran. Macmiilku wuxuu uhelay Airwoods HVAC iyo naqshadaynta qolka nadiifinta iyo wax soo iibsiga. Waxay qaadatay 30 maalmood wax soosaarka waxaanan kuu diyaarinaynaa laba 40 weel oo weel ah oo loogu talagalay alaabada la rarayo. Kunteenarkii ugu horreeyay ayaa la raray dhammaadkii Sebtember. Weelka labaad ayaa la raray bishii Oktoobar macmiilkuna wuxuu helayaa dhowaan Noofambar.
Kahor inta aan alaabta la soo saarin, waxaan kormeernaa weelka si taxaddar leh waxaanna hubinnaa inay xaaladdiisu wanaagsan tahay oo aan daloolo ku dhex jirin. Weelkayaga koowaad, waxaan ku bilaabaynaa waxyaabo waaweyn oo culus, oo waxaan ku dhejineynaa sanduuqyada darbiga hore ee weelka.
Waxaan sameysaneynaa xirmo alwaax u gaar ah si aan u sugno waxyaabaha ku jira weelka. Oo iska hubi in meel bannaan oo faaruq ah ku jirin weelka alaabteenna laga beddelayo inta rarku socdo.
Si loo hubiyo gaarsiinta iyo ujeedooyinka ilaalinta saxda ah, waxaan calaamadaha cinwaannada macaamiisha gaarka ah iyo faahfaahinta shixnad ku ridnay sanduuq kasta oo ku jira weelka.
Alaabada waxaa loo diray dekedda, oo macmiilku wuu heli doonaa dhowaan. Markay maalinti timaaddo, waxaan si dhow ula shaqeyn doonnaa macmiilka shaqadooda rakibaadda. At Airwoods, waxaan ku bixinaa adeegyo isku dhafan oo markasta oo ay macaamiisheennu u baahdaan caawimaad, adeegyadeennu had iyo goorba way ku socdaan.